Induction Catheter Kubvisa Kuchenesa Maitiro Ekushandisa
Yakakwira Frequency Induction Catheter Kubvisa Kuchenesa Kunyorera
Iyi induction catheter inokonzeresa kupisa sisitimu inowanzodiwa muMedical Indasitiri yekugadzira catheter machubhu.
Iine induction catheter tipping, RF simba rinosimudza tembiricha pane isina simbi kana yendarira muforoma, pasina panyama kubata iyo furu kana kushandisa yakavhurika murazvo. Zano re catheter rinobva raumbwa nekuisa iyo yepurasitiki tubing mune inopisa moto kana chakuvhuvhu kuti vagadzire mativi akapoteredzwa. Kuperera kwakatenderedzwa kwecatheter chubhu inobvumira iyo chubhu kuti iiswe zvakachengetedzeka mumunhu ine hushoma kukuvara kune nyama yemuviri. Iyo fosi ichavawo newaya inopinza mutubhu inodzivirira kuumbwa kwekuvharika. Iyo chaiyo uye chaiyo tembiricha yekudzora kugona kweiyo induction yakanakira iyi mhando yeiyo chaiyo yekurapa kunyorera. Iwo mafuru anowanzo gadzirirwa nejasi rakatonhoreswa nemvura rinoshandiswa kutonhodza iyo moto unopisa kudzoka kune yakatsanangurwa tembiricha yekutanga iyo inogonesa iyo induction system kutungamirwa nenguva yakatarwa / kutenderera nzvimbo.
Induction kudziyisa michina ye catheter tipping inovimbisa mwero mukuru wekudzokorora. Maitiro ekugadzira anokurumidza uye chaiwo.
Catheter kutetepa kazhinji kunoda simba rakaderera. HLQ ine akati wandei akaderera emagetsi mayuniti ayo akakodzera kune catheter tipping uye inokurudzira iyo chaiyo michina inoenderana nezvikamu uye zvakasarudzika zvinoshandiswa zvinodiwa.
Kuchenesa Catheter Tipping Die
Chinangwa: Kupisa aruminiyamu catheter kurongedza kufa kusvika pamusoro pe2850F mukati memasekonzi maviri kusvika mashanu ekuumbwa kwecatheter zvinhu. Parizvino, kudziyisa kunoitwa mumasekondi gumi nemashanu nemidziyo mizhinji yekuisa michina. Mutengi angade kushandisa solid state induction heating equipment kudzikamisa nguva yekupisa uye kugadzira nzira inoshanda.
Material: Aluminium catheter inosungira kufa inoyera 3/8 ″ OD uye 2 0.035 yakareba neisina magineti sleeve pamusoro penzvimbo yekupisa. Iyo catheter zvinhu zvakatsanangurwa sekufanana neye polyurethane plastiki. Zvakare, XNUMX ″ dhayamita simbi waya
yakaiswa mu catheter tube kudzivirira kudonha.
Application: Iyo DW-UHF-3kW solid state induction magetsi yakatemwa kuti inyatso gadzira mhedzisiro inotevera:
-Inguva yekupisa kwemasekonzi 3.3 kusvika 5000F uye kugadzira iyo catheter yakawanikwa kuburikidza nekushandisa maviri (2) pamusoro peviri (2) shandura helical coil.
-Ati catheter yemhando yakaumbwa nekutsikirira 1/2 poly yeiyo polyurethane chubhu muforoma uchichengetedza chimiro kuburikidza nekushandisa iyo 0.035 ″ waya kudzivirira kudonha kweiyo chubhu. Mhedzisiro yeLaborari inoratidza kuti kuderera kwenguva kwakazadzikiswa izvo zvinobvumidza kuwedzera kwakakura mukugadzirwa uku usiri kupa zvibayiro.
Induction Heating Equipment: DW-UHF-3kWkW solid state induction magetsi inosanganisira chiteshi chekupisa chiri kure chine (1) capacitor yakazara 1.2 µF.
Categories Technologies Tags Catheter Kubvarura, Catheter Kubvisa Brazing, Catheter Kubvisa Kupisa, catheter kubatira induction brazing, Induction Catheter Kubvisa, induction Catheter Kubvisa Brazing, induction catheter yekupisa hita, RF catheter kubaya, RF catheter ichikwenya brazing, RF catheter ichipisa kupisa Post navigation